CWP: Nkọwa zuru ezu nke Ogwe njikwa njikwa maka Bochum Weebụ | Site na Linux
CWP: Nyocha zuru ezu nke Ogwe njikwa Web Bochum efu
CWP: A Zuru ezu Review nke Free Control Panel maka Web Bochum
Mgbe anyị kwusịrị n’isiokwu bu nke a ụzọ «CWP» na ndị ọzọ «Paneles de Control» na «Web Hosting» akpọ "CWP (CentOS Web Panel): Ogwe njikwa njikwa n'efu maka njikwa weebụ", na nke a anyị ga-emeso ya na omimi, ya bụ, anyị ga-eme nyocha zuru ezu nke Ogwe njikwa njikwa maka Bochum weebụ mara dika «CWP», a na-akpọ «CentOS (Control) Web Panel».
Cheta nke ahụ «CentOS (Control) Web Panel» dị ka ndị ọzọ «Paneles de Control» dị anyị ikwado oru oma ma di ire nke saịtị anyi na-aru oru n’ime sava nke ejiri. Na nke ahụ karịsịa, «CWP» bụ a Nbudata ngwanrọ Ezubere maka ochichi na ngwa ngwa nke «Servidores (Dedicados y VPS)» (naanị na CentOS), na ebumnuche iwelata mbọ nke ụfọdụ ọrụ mgbagwoju anya, n'etiti ọtụtụ uru ndị ọzọ.
Maka nyochaa ugbu a banyere ngwa ahụ, ekwesịrị ịdeba na CWP Official weebụsaịtị enwere ugbua njikọ diri inwale ya site na a Ngosipụta Web Sistem. enwere ike ịnweta ya dị ka usoro ndị a:
root / admin Banye Banye
Adịghị SSL Banye: https://79.137.25.230:2031
Aha ojii: mgbọrọgwụ
Onye Ọgwụgwụ Ọhụrụ Banye Akaụntụ Banye (Vidiyo Youtube)
Adịghị SSL Banye: http://demo1.centos-webpanel.com:2082
Banye SSL: https://79.137.25.230:2083
Aha ojii: Uchechukwu
Otú ọ dị, maka nyocha anyị anyị ga-eji 3.20 mbipute nke ezigbo na arụnyere echichi nke «Control Web Panel».
1 Ogwe njikwa Web
1.1.1 Ntọala CWP
1.1.2 Njikwa faili
1.1.4 Ọrụ SQL
1.1.5 Akaụntụ E-mail
1.1.6 Ọrụ DNS
Ogwe njikwa Web
Ozugbo arụnyere na hazie «CWP», ma mepee site na weebụ iji banye maka oge mbụ anyị hụrụ a mfe na-egbu maramara ọrụ ohere interface, ebe naanị aha nke «Usuario (Username)» na ndi nke ya «Contraseña (Password)» imecha site na ịpị «Entrar (Login)». Dị ka e gosiri na foto dị n'okpuru ebe a.
Ozugbo n'ime, na «CWP»na-egosi onye ọrụ na ihuenyo mbu nke a na-akpọ«Tablero». Nke na-egosi ozi ndị a na ndabara: Data nke ikpeazụ accesses, graf nke egosi nke ojiji nke atụmatụ (saịtị) na data nke atụmatụ (aha na ngalaba, IP nke Ngalaba na DNS sava nke nkwekọrịta nkwekọrịta.) aka nri elu egosiputa ozi banyere onye ọrụ wee banye, asụsụ ahazi enwere ike gbanwee, na a Mbido bọtịnụ ịgbanwe site na interface gburugburu, ọ bụrụ na ọ dị.
Ọ na-enye ohere ịbanye na ngalaba ndị ọzọ nke sistemụ bụ:
Nke gunyere ngalaba ndi a:
Njikwa sistemụ faịlụ
Gosi usoro MySQL
Onye na -aza ajụjụ
DNS mpaghara Editor
Extplorer njikwa faili
Nke gunyere nhọrọ ndi a:
Lee ndepụta ndepụta
Nakwa na njedebe nke ogwe aka ekpe aka ekpe ọ na-egosi anyị ohere ndị a:
Iji diski ohere
Ntọala CWP na Njikwa faili
Email Akaụntụ na DNS Atụmatụ
Ngwa mgbakwunye na Mwube
Dị ka ị nwere ike ịghọta «CWP»bu ngwanrọ zuru oke ma di uku nke nwere ike izute ọtụtụ mkpa ọ bụla njikwa weebụsaịtị. Ka anyị ghara ichefu nke ahụ «CWP» ọ bụghị n'ezie a «Software Libre» ya onwe ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị kpuchie ọ bụla variant nke «Licencia Publica General de GNU» (GNU General Public License ma ọ bụ GNU GPL ma ọ bụ naanị GPL).
Mana enwere ike ịkekọrịta, budata, wụnye ma jiri ya na enweghị mmachi iwu ma ọ bụ mmachi ọ bụla, ebe ọ bụ na ọ nwere n'ezie nwere ikike na ya free version. Mgbe emechara isiokwu ndị ọzọ, anyị ga-aga n'ihu na-egosi karịa ngwa a dị ukwuu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i jirila «CWP», ka anyị mara gị ahụmahụ site na-aza ajụjụ, ime ka omuma nke Community.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » CWP: Nyocha zuru ezu nke Ogwe njikwa Web Bochum efu
N'ebe a ka m na-ahapụ azịza m, emesịa m nyefee ha ebe a ma m kọwaa ha nke ọma.
hahaha ndetu maka ndị okike nke blog a, ha boro m ebubo na enweghị m ike ibipụta ya na aha onye ọrụ ọzọ yana "ọ bụ mpụ"
Ndo maka onye ọrụ NAZA hehehe
Firefox 69.0.3 melite wepụtara yana ndozi ọma